Zụrụ Fur Butterfly Short Sleeve T-shirt With Button Skirts For Girls - Free Mbupu & Enweghị |tụ | WoopShop®
$ 15.99 Ịgachi price $ 26.99
Akwa Ibu 4T 3T 7T 6T 24M
Fur Butterfly Short Sleeve T-shirt With Button Skirts For Girls - B / 4T na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Ntuchi Ụdị: Pullover
Uwe Aka: Butterfly Sleeve
Kwadoro: Dabara nha nke buru ibu, buru ogo gi
size Na na * 2 n'elu uwe mwụda Age
Mara: Enwere 2-3% dị iche iche dịka mmesiri ntuziaka. Biko lelee ihe nlele anya nke ọma tupu ịzụta ihe ahụ. Biko rịba ama na ekwesịrị ịnakwere obere agba dị iche iche n'ihi ọkụ na ihuenyo. 1 inch = 2.54 cm
Dabere na 71 nyocha
Ngwaahịa ahụ bịara n'ime otu izu na ọkara. Ya mere, obi ụtọ, dị ezigbo mma